Ndị uwe ojii China na-eji iko nyocha ihu iji chọọ ndị a na-enyo enyo | Akụkọ akụrụngwa
Ndị uwe ojii China na-eji ugogbe ihu iji chọọ ndị a na-enyo enyo
Nkà na ụzụ agafeela ọtụtụ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, taa, anyị nwere ike ịhụ etu ngwaọrụ ndị naanị maka ihe nkiri sayensị akụkọ amalitela ịbụ ngwaahịa, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ. Ọchịchị China enwebeghị mgbe ejiri ịnye ọtụtụ nnwere onwe ọ bụghị nye ụmụ amaala ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ gbalịrị ime onwe ha ebe ahụ, ma ọ bụrụ Google, Facebook, Microsoft ...
Ọhụrụ gọọmentị China na-aga ọzọ amachi nzuzo nke ụmụ amaala ya, Anyị na-achọta ya na iko, ụdị Google Glass, nke ndị uwe ojii mba ahụ amalitela iji, iko, nke ndị ọrụ ahụ ji amata ndị njem a boro ebubo na ha mere mpụ, na-achọ ma jide ma ọ bụ na ha na-eme njem ụgha akwụkwọ.
China chọrọ iji ohere ọgụgụ isi zuru oke mee ihe maka nke a, ọ mepụtala usoro nyocha ihu nke nwere ike ịmata, yana naanị foto, onye ọ bụla ruru ọtụtụ igwe foto onyunyo na-agbasasị na mba ahụ, naanị sekọnd ole na ole na 90% ziri ezi. A gbasaa usoro a mgbe nnabata nke Igwe enyo eji amata ndị uwe ojii Zhengzhou amalitela iji.
Oge ọ bụla usoro ahụ na-amata mmadụ, onye ọrụ ahụ nweta ngosi na ekwentị gị nke mere na ị nwere ike ime ihe ozugbo ma ọ bụ ịga n'ihu dịka ọnọdụ na ihe egwu dị na ya. Usoro a bidoro ọrụ na February 1, dịka ihe ha kwuru, ha jisiri ike nwụchie mmadụ asaa nọ na nyocha ma nwude. Mana na mgbakwunye, o jidekwara ndị njem 26 bụ ndị ji akwụkwọ ụgha na-eme njem, ebe ọ bụ na sistemụ a na-enyekwa ndị uwe ojii ohere ịlele ngwa ngwa ma ọ bụrụ na njirimara nke isiokwu a ziri ezi.
Onye mepụtara iko ndị a bụ ụlọ ọrụ China LLVision Technology, ụlọ ọrụ na-arụpụta obere vidiyo vidiyo nwere sistemụ ihu ihu. Dabere na LLVision, na ule dị iche iche ọ rụrụ na ngwaahịa a, sistemụ a nwere ike ịchọpụta chọpụta mmadụ n'etiti ihe karịrị 10.000 ndị na-aga ime ihe ruru obere 100 milliseconds, ọ bụrụhaala na echekwara ozi ahụ na ngwaọrụ ahụ ma ọ bụghị n'ígwé ojii, nke na-egbu oge usoro nchọpụta na ọ dịghị eme ka ọ bụrụ usoro arụmọrụ dị otú ahụ. Na mgbakwunye, LLVision na-ekwukwa na izi ezi na-ebelata n'ihi mkpọtụ ikuku (ntụpọ ọkụ, obere ọkụ ọkụ ...), yabụ ọ ka nwere ọtụtụ ohere maka imeziwanye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Ndị uwe ojii China na-eji ugogbe ihu iji chọọ ndị a na-enyo enyo
BQ na-akwado maka MWC afọ a na bq Aquaris VS na bq Aquaris VS Plus